WOWOW Dheri-buuxiyaha Darbiga Ku Xidhan ee Nikel-cadaysan - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada / WOWOW Foornada Dheriga Dheeriga Ah ee Lagu Xiirayo Nickel
Thanks to naqshadda ergonomic, dheriga dhalada dusha sare ee birta aan fiicnayn ayaa fiican in la isticmaalo.
Qalabkeeda birta ah ee aadka u sareeya ayaa ka dhig mid aad u waarta.
Waxsoosaarkan wuxuu siiyaa canfarta taageero la isku halleyn karo.
2311300 tilmaamaha rakibaadda
Tuubada dareeraha naxaasta leh ee jilicsan ee loo yaqaan 'nickel pot potool tub' 2311300
Mawaxaad raadineysaa waxyaabo gaar ah oo naqshadeynta jikadaada cusub ka dhigaya jikadaada labadaba shaqeynaya oo raaxo leh waqti isku mid ah? Markaa tubbada dareeraha ah ee dareeraha ah ee dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel potrol tubida dareeraha ah ayaa noqon kara wax adiga kuu ah. Mararka qaar miyaad la halgameysaa inaad qaado dheryo biyo ah jikada jikadaada ilaa foornadaada? Raaxo-darradaan ayaa iska leh wixii la soo dhaafay oo leh tubbada dareeraha naaska ee loo yaqaan 'nickel pot filter' ee WOWOW. Tubooyinka buuxinta dareeraha dheriga sida caadiga ah waxaa lagu dhajiyaa gadaasha foornada jikadaada si ay ugu xirmaan biyo meel u dhow aaggaaga wax lagu karsado. Tani waxay si gaar ah u habboon tahay marka ay tahay inaad buuxiso dheryaha waaweyn biyo biyo karkaraya. Uma baahnid inaad dhaqaaqdid dheriyo oo si fudud culeyska uga qaadi kara daraasiin wiqiyadood. Gaar ahaan markii aadan dooneynin inaad carqaladeyso gacmahaaga ama curcurkaaga, tan waxay noqon kartaa xalka aad u fiican ee raaxada jikadaada.
Saamaynta kale ee wanaagsan ee dareeraha tuubada dareeraha naaska ee loo yaqaan 'Neefkeelka dareeraha' WOWOW waa xaqiiqada ah inaad si fudud u nadiifin karto foornada jikadaada, maadaama aad leedahay xiriir biyo oo kugu dhow. Nadiifinta ayaa aad u fudud marka loo eego tuubbada dheriga lagu buuxinayo. Tuubada dareeraha naaska ee loo yaqaan 'nickel pot filter' ee WOWOW waxaa ku qalabeysan labalaabyada dhoobada dhoobada ah si loo dammaanad qaado khibrad la'aan soo daata. Haddii mid ka mid ah alwaaxyada furan yahay, tani ma sababi doonto wax daadanaya si kastaba ha noqotee. Sidaa darteed had iyo jeer waa lagu talinayaa in la damiyo labada baaldi si loo hubiyo in foornada jikadaadu had iyo jeer ay qalalan tahay. Waxaad ka fiicnaan laheyd inaad ka xumaato!
Qubeyska dareeraha ah ee dareeraha ah ee dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel pot filter tub'
Qashinkan dareeraha ah ee lagu buufiyo dareeraha naaska ee 'WOWOW' wuxuu leeyahay aragti casri ah. Xaqiiqdii waxay siineysaa mid gaar ah, taabasho cusub hal abuur jikadaada marka lagu daro qiimaheeda wax lagu daro. Maaddaama qasabadaha buufinnada sida caadiga ah aan badanaa la aqoon, dadka badankood waxay ku weydiin doonaan arrintan tan markay arkaan jikadaada. Meelaha ugu muhiimsan ee lagu hayo jikooyinka waa tubooyinka. Tan macnaheedu waa in dareenka dadku si dabiici ah u soo jiitaan tubooyinka qolka jikada marka ay eegaan jikadaada. Qashinkan dareeraha ah ee dareeraha lagu buufiyo ee loo yaqaan 'nickel pot oil' wuxuu ku habboon yahay meelkasta oo jikada lagu qurxiyo, wuxuuna xaqiiqdii soo jiidan doonaa dareen gaar ah.
Qulqulka foornada dareeraha naxaasta ah ee WOWOW ee dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel pot filler tub' ayaa si sahal ah loogu dari karaa tuubooyinka kale ee jikada ee casriga ah si loo sameeyo midnimo wadajirka ah ee jikadaada. Khadadka labajibbaaraneedka oo ay weheliso qaababka wareega ayaa sameeya muuqaal ciyaar. Naqshadeeyayaasha WOWOW ayaa caalami ahaan loo aqoonsan yahay inay sameeyaan nashqadaha quruxda badan ee geesinimada leh oo si fudud loogu daabici karo joornaal kasta oo caan ah oo ku saabsan nashqadaha jikada qaaliga ah.
Gaaro tuubada dareeraha ah ee dareeraha ah ee dareere ah
Quruxda dheriga dheriga ah waa inaad ka fujiso darbiga u dhow foornadaada. Si fudud ayaa loogu keydin karaa derbiga sababtoo ah kala goysyada mataanaha ee iswada. Sidan ayey u xumaynaysaa goobtaada wax lagu karsado maadaama ay nadiifiso aagga wax lagu karsado. Laakiin waxaad lahaan doontaa ku dhowaad 24 ilbiriqsi oo buuxin kara dheriga weelkasta oo foornada lagu yaal. Tubada buufinka dheriga si fudud ayaa loo fidi karaa markii aad dhab ahaan ubaahantahay, isla markaaba waad la noqoneysaa markaad dhameyso. Markaad ku rakibtid tubbada dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel pot filter tub', waxaad ka qoomameyn doontaa inaadan horay u rarin qalabkan.
Biyaha sidoo kale si wanaagsan ayey ula socdaan soosaarayaasha tayada sare ee 'Neoperl ABS'. Waxay ku siinaysaa ka-hortag-ka-faafis iyo biyo-soo-baxa biyo-la’aan ah. Ku buuxinta dheryahaaga foornada foornada biyo xoog leh ma sababi doonto buuq. Biyo ku buufin waxay sababi kartaa xaalado khatar ah, gaar ahaan markaad ku karineyso godadka dabka ee dabka kariyaha kale ee jikadaada. Foornadaada wax lagu karsado waa mid had iyo jeer badbaadinaysa, oo waad u isticmaali kartaa markay dabku bakhtiisto, adigoon wax khatar ah ku keenin jikadaada.
Tubbada dareeraha ah ee dareeraha lagu buufiyo ee loo yaqaan 'nickel pot filter'
Labada baaldi ee tuubada dareeraha naaska ee loo yaqaan 'nickel pot filter tub' ayaa laga sameeyay walxaha dhoobada ah, waxayna dammaanad ka dhigaysaa in si rog-rog ah loo beddelo. Waad dareentaa in tuubooyinku aysan keenin wax gadaal-gadaal ah isla markaana aysan jirin kala-goysyo midkoodna. Sidaas awgeed waxaa lagugu hubiyaa hawlgallo habsami leh. Xitaa marka aad leedahay kala-goysyo jilicsan, tubadan dareeraha ah ee dareeraha lagu buufiyo ee loo yaqaan 'nickel pot filter tub' ayaa si fudud looga shaqeyn karaa. Thanks to naqshadda ergonomic, derbiga buufiska lagu buuxu ee buuxu aan fiicnayn ayaa aad u fiican in la isticmaalo. Labada 360 digrii ee wareegga hubka wareejiya ayaa si siman u shaqeynaya sidoo kale.
Qalabka bir-bir aad u sareeya oo heer sare ah ayaa ka dhigaya tubadan dareeraha ah ee dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel potering' tubada dareeraha ah mid aad u waarta. Dusha sare ee loo yaqaan 'nickel Nickrus' ee dareeraha dareeraha dheriga ayaa labadaba ka hortagga xoqida iyo dusha xoqida. Xiriyayaashu waxay ka samaysan yihiin naxaas adag, taas oo damaanad qaadeysa socodka biyaha oo caafimaad qaba iyadoo aan wax hadhaa ah oo bir ah ku jirin. Xalka ugu fiican markaa waa adiga iyo reerkaagaba. Tayada darteed, qasabadan dareeraha ah ee dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel pot filter' waxaa badanaa lagu isticmaalaa goobaha ganacsiga sida maqaayadaha sidoo kale.
Warranty burush foornada dareeraha nikiska
Tuubada dareeraha ah ee dareeraha ah ee dareeraha ah ee naxaasta leh waxay la timid qalab xirmo oo dhameystiran. Qalabkaan rakibaadda waxaad si fudud ugu rakibi kartaa dareeraha dareeraha ah ee naxaasta leh ee loo yaqaan 'nickel pot filter' naftaada adigoon wax dhibaato ah qabin. Tani waxay kuu badbaadin doontaa kharashyada tuubooyinka qaaliga ah. Xirmada rakibaadda waxay la imaaneysaa dhammaan agabyada aad ugu baahan tahay inaad ku dhejiso tuubbada dheriga dhajinta derbiga dul saaran. Marka lagu daro kabaha Allen, cajaladda Teflon, iyo galoofyada xiridda si aaney u dhaawacmin gacmahaaga una nadiifintooda nadaamka rakibaadda. Sidaas darteed waxaan kuu ballan qaadeynaa inaad ku rakibi karto tubadan dareeraha ah ee dareeraha ah ee naxaasta leh ee nambarka leh nus saac gudahood. Dabcan kaliya shuruudaha inaad leedahay dhibic biyo meel sax ah.
Maaddaama WOWOW ay ku qanacsan tahay tayada qasabadda buuxinta nikkel-ka birta ah, waxay ku siinaysaa muddada damaanad-qaadka ah ee 5-sano ah. Maaddaama WOWOW ay bixiso qiimaha ugu fiican ee lacagta aad heli karto, waxay sidoo kale ku siinaysaa dammaanad 90 maalmood ah oo lacag celin ah. Sidaa darteed ma lihid wax khatar ah haba yaraatee. Haddii aadan ku qancin doonin tuubadan buuxisay nikkel -ka nikkel, waxaad si fudud u helaysaa lacag celin buuxda. WOWOW waxay u taagan tahay badeecadeeda iyo inaad isla markiiba ogaan karto.
Faa'iidooyinka qasabadda buuxiyaha nikkel -ka ee la jajabiyey oo kooban:
Buuxi dheri naqshad casri ah
Kala -goysyada tayada leh iyo waalka
Aad ammaan u ah in la isticmaalo
Dhammaadka nikkel ee la jajabiyey
SKU: 2311300 Categories: Qubeyska jikada, Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada Tags: Nickel caday, Dheecaanka Dheriga, Kali Lever
360 Wareeg Shahaadada, Labad Wadaag, Laabid